Ikhaya le-Jobless Wanderer | ILifa leMveli laseKathkuni 2
Igumbi lakho lokulala e ifama sinombuki zindwendwe onguOllie
Le ndawo yindlu yemveli ye-Himachali eyenziwe ngamaplanga e-deodar, ilitye kunye nodaka ejikelezwe phantse yi-acre yomhlaba wefama kunye nendawo yokwenza izinto. Umntu kufuneka ahambe i-1 km ukuya endlwini ukusuka kwindawo yokupaka. Sihlala nezinja ezimbini zeGaddi ezibizwa ngokuba nguBhairon kunye noBadal. Sizama ukukhulisa okanye ukufumana kwindawo yethu uninzi lwezithako zethu zokutya.Indlu ipholile ebusika nasehlotyeni. Inombono we-360-degree yee-Himalaya ezinkulu. Kodwa asiyondawo yokulindela ubunewunewu okanye ihotele efana nenkonzo.Airtel & Jio 4G isebenza kakuhle
Le propati ibekwe phezulu kwilali. Yindlu yokugqibela emelene nehlathi elikhulu lemithi yompayini. Isiseko sendlu yethu sineminyaka engaphezu kwe-100 ubudala. Le ndawo kumaxesha angaphambili yayisetyenziswa njengendlu yokumkani wasekuhlaleni ngenxa yeembono ezimangalisayo, umhlaba otyebileyo kunye nesikhundla sokulawula. Sihlala noluntu lwelali. Aba ngabantu bomthonyama bale ndawo banenkcubeko yabo eyodwa. Siphila njengabantu basezilalini abaphila phantse ubomi obufana nobabo. Ke, iindwendwe ziya kufumana incasa yobomi bokwenyani, ilali ekrwada yeentaba kunye nabantu bayo. Kungoko sibulela ukuthula emva kwentsimbi yesi-9 ebusuku. Ubomi bethu bulungelelaniswe malunga nemisebenzi yethu kwaye ukutya kuphekwa ngamaxesha amiselweyo. Kodwa wamkelekile ukuba uzenzele iti, ikofu okanye amashwamshwam ekhitshini nangaliphi na ixesha. Senditshilo, ukuba ungumntu othanda ukutya ngoko singathanda ukukucebisa ukuba uzame ukutya okusemantla empuma okuvela kwinkosi yethu. Sipheka kakhulu yonke into ekhoyo apha. Kwakhona, ummandla ojikeleze apha awulingani kakhulu ukuba usencotsheni yentaba. Ke, isoloko ihamba inyuka okanye ihla kumphakamo ongaphezulu kwe-1500 yeemitha. Gcina oku engqondweni ngelixa undwendwela le ndawo. . Ngoko lindela ubomi obuluhlaza bentaba ngokuzola, uxolo kunye nemibono emangalisayo, ukutya okulungileyo, ukwabelana kunye nokuziqhelanisa nezakhono ezinomdla kunye nezifundo. Yiba namava obomi bezizwe zakudala kwinkulungwane yamashumi amabini ananye. Siyilungisile yonke indawo ukusuka ekuqaleni ngothando olukhulu nothando. Sinegumbi elinye lokulala elinabantu ababini kunye negumbi elinye elinomntu omnye. Negumbi lokuhlambela lokwabelana. Singathanda ukukumema ukuba uze, uhlale nathi kwaye ufumane i-vibe eluhlaza yale ndawo njengathi. Siyabuthanda kwaye siziqhelanise nobugcisa obubonakalayo, sonwabela umculo omnandi weentlobo ezahlukeneyo kwaye siyabuxabisa ubugcisa namagcisa ngokubanzi. Kukho iincwadi ekufuneka zifundwe kunye nemiboniso bhanyabhanya kunye namaxwebhu ekufuneka abukelwe.
Qaphela* Le ndawo asiyondlu yakho yesiqhelo okanye ihotele efana nezinto. Ukuhlala apha kulucelomngeni ngenene kodwa kuyonwabisa kwaye kunoxolo lwengqondo. Yiyo loo nto nceda uze apha ngengqondo evulekileyo kwaye uzimisele ukuthabatha nayiphi na indalo esinika yona.
Kukho iindlela zokuhamba intaba eziqala kanye ecaleni kwendlu. Kukho intlaninge yamathuba okuhlamba nje kwindalo ecocekileyo. Umntu unokujonga kwakhona iilali ezikufutshane ukusuka apha. Okanye uhambo oluncinci lweentsuku ukuya eJalori Pass kunye neSerolsar Lake, Okanye Uhambo losuku oluya kumlambo iTirthan. Siyaziqhelanisa kwaye siyathanda ukwabelana ngezifundo ezifana neYoga, ukucamngca njl. Sithanda ukuzisa iinkalo ezibizwa ngokuba yimfihlakalo kubomi bemihla ngemihla obusebenzayo ngaphandle kweemfundiso ezininzi okanye i-orthodoxy. Njengoko sikuthatha njengamava obuqu anzulu kunokuba silinge lentlalontle okanye into esinokushumayela ngayo.
Umbuki zindwendwe ngu- Ollie
Ndingumsebenzi wakwa-Airbnb kunye nombuki zindwendwe. Ndiza kuqinisekisa ukuba ulindelo lwakho luyahlangabezana nezikhokelo ze-airbnb ngexesha lokuhlala kwakho nam. Indawo yam ineembono ze-360 degree of Greater himalays njenge Pir panjal range kunye neRohtang. Ukudlula kweJalori kubonakala ngokupheleleyo kwigumbi lethu lokulala. Ukuze ufike kwindawo yethu kufuneka unyuke intaba malunga ne-1km. Zininzi izinto onokuzibona kunye namava Yiyo loo nto ayilunganga ukuba undwendwela ngaphantsi kobusuku obu-2. Kwakhona qiniseka ukuba ufika elalini ngaphambi kokuba kube mnyama. Okanye xa kumnyama akucebisekanga ukuba uhambe kwindawo enenduli. Singathanda ukwabelana ngebali elimangalisayo malunga nendawo, inkcubeko kunye nomzuzu omnandi kwisidlo sangokuhlwa. Siyakukusa kwiindlela zokuhamba ezikufutshane okanye uhambe ngeenyawo ukuya elalini.
Ndingumsebenzi wakwa-Airbnb kunye nombuki zindwendwe. Ndiza kuqinisekisa ukuba ulindelo lwakho luyahlangabezana nezikhokelo ze-airbnb ngexesha lokuhlala kwakho nam. Indawo yam inee…